Tongren Hydropower Chiteshi Mafashamo Ekudzora Basa Rekuvandudza Purojekiti
Mafomu: Mafashama Kudzora, Hydroelectric simba rekugadzira
Nzvimbo: Guizhou, China
Yakareruka Yakakwidziridzwa Dhamu (SED) idombo remhando nyowani iro rinoshandisa bhuku re hydraulic pombi kana injini yedhiziri kudzora mapaneru kumusoro uye pasi kuitira kuchengetedza mvura nekuburitsa. Chekutanga hutsva hombe yekumisikidza ruoko kumanikidza pombi tekinoroji uye haudi magetsi. SED inonyanya kushanda kunzvimbo yemagetsi uye gungwa regungwa. Parizvino, yanga ichikurudzirwa zvakanyanya muMyanmar, Bangladesh, Vietnam nedzimwe nyika.
Rubha dhamu Sumo
Rubha dhamu Nhanganyaya Rubha dhamu rudzi rutsva rwe hydraulic mamiriro kana ichienzaniswa nesimbi sluice gedhi, uye rakagadzirwa nesimba-yakasimba jira rinonamatira nerabha, iyo inoumba bhegi rerabha rinosungira pane yepasi pevhu yedhamhu. Kuzadza mvura kana mweya muhomwe yedhamhu, dhamu rerabha inoshandiswa kuchengetedza mvura. Kuburitsa mvura kana mweya kubva muhombodo yedamu, inoshandiswa pakuburitsa mafashama. Rubha dhamu rine zvakawanda zvakanaka zvichienzaniswa nedzakajairika dzimba, senge yakachipa mutengo, yakapusa hydraulic chimiro, ipfupi constructio ...
Kuzivikanwa kweContainerized Water Treatment Plant
Kuunzwa kweContainerized Water Treatment Plant Iyo Containerized Water Treatment Plant chigadzirwa chemidziyo chakajairika chakagadzirwa neBeijing IWHR Corporation (BIC). iyo yakagadzirirwa kurapwa zvishoma huwandu hwemvura. Iyo yeContainerized Water Treatment Plant inopatsanurwa kuita mhando mbiri dzakasiyana dzeakateedzana: (1) Imwe ndiyo yekurapa kwemvura yetsvina kuti ishandiswe zvakare: (Containerized Waste-Water Treatment Plant); (2) Imwe yacho kunatswa kwemvura kwekunwa; (Mudziyo Unochenesa Mvura).
Chinangwa: Kupa mhinduro dzakanakisa dzemishonga yekurapa mvura.
Kupa zvinonyanya kudhura-zvinoshandiswa pakurapa mvura zvigadzirwa.
Kugonesa vanhu vane mvura yakachena uye yakachena.
Kukosha: Kuvimbika Kushushikana kuTekinoroji-yakatarisana nevanhu
Zvimiro:1.Optimized maitiro / mhinduro
Kuita kwepamusoro neakanakisa mutengo-kugona
3.High kunyatsoshanda / Low simba rakawanda
4.High kuvimbika / Hupenyu hwakareba kutenderera
5.Simple mashandiro uye kushoma kwekuchengetedza
6.Small tsoka / Kuvimbika
7.Kutsvaga kwe "hunyanzvi hwekugadzira"